Horudhac: Sheffield United vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Premier League) – Gool FM
(Sheffield) 21 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Sheffield United ayaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League caawa ku soo dhoweynaysa Arsenal garoonkeeda Bramall Lane.
Naadiga reer London ee Gunners ayaa dhankeeda eegeysa inay guul gaarto caawa si ay u saldhigato kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Taariikhda: Isniin, 21 Okt 2019
Tababaraha Kooxda Sheffield United ee Chris Wilder ayaa siin doona John Fleck, Oli McBurnie iyo David McGoldrick fursad kasta oo ay ku caddeeynayaan taam ahaanshahooda.
Dhammaan saddexdaas xiddig ee aan kor ku soo sheegnay ayaa ka maqnaa waajibaadka xulalkooda qaranka sababo la xiriira dhaawacyo ay qabeen.
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette ayaa wajahaya tijaabo la marsiin doono goor dambe si loo ogaado inuu kulankan ciyaari karo iyo inkale kaddib markii uu dhaawac canqowga ah uu la maqnaa tan iyo bilowgii bishii September.
Reiss Nelson oo ka tirsan Arsenal kaasoo qaba dhaawac jilibka ah ayaan dib ugu soo laaban doonin tababarka illaa bisha November.
>- Arsenal ayaa guuldarreysatay kaliya saddex ka mid ah 26-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Sheffield United tartammada oo dhan.
>- Sheffield United ayaa guuldarro la’aan ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kulamada sare ee horyaalka garoonkeeda kula ciyaartay Arsenal, waxaana ay ka haystaa 1 guul iyo 3 barbaro, tan iyo markii ay guuldarro 0-2 ka soo gaartay Gunners bishii April sanadkii 1991-kii.
>- Si kastaba ha noqotee kulankan ayaa noqon doona midkoodii ugu horreeyey ee labadaan kooxood ay isku arkaan tan iyo bishii December sanadkii 2006-dii.
>- Arsenal ayaa kulamo badan oo horyaalka Premier League ku soo ciyaartay garoonkan Bramall Lane iyadoo aan guulo ku soo gaarin, waxaana saddex kulan oo ay booqatay kala soo laabatay 2 barbaro iyo 1 guuldarro, waana in ka badan garoon kasta oo kale marka laga hadlayo tartankan horyaalka.
>- Sheffield United ayaa khasaaro la kulantay saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku dheeshay horyaalka Premier League, markii ugu dambeeyey oo afar kulan oo xiriir ah looga adkaado garoonkeeda tartanka horyaalka waxa ay ahayd bishii April sanadkii 1965-kii.
>- Kooxda Sheffield United ayaa dhalisay kaliya hal gool ka hor inta aan la aadin qeybta nasashada ciyaarta kulammada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana in ka yar koox kasta oo kale, dhammaan todobada gool oo ay dhalisay ayaa sidoo kale waxaa u kala dhaliyey todobo ciyaaryahan oo kala duwan oo ay ku jiraan faa’iido ay ku heshay labo gool oo ay iska dhaliyeen xiddigo ka tirsan kooxihii ka soo horjeeday (Own goals).
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyey 49 gool 75 kulan oo uu u ciyaaray Arsenal tartammada oo dhan, waxaana uu hal gool u jiraa inuu noqdo ciyaaryahankii lixaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan 50 gool ugu dhaliya Gunners.